ချီလီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SRL) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကချီလီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SRL) ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများပေးပါသည်။ ချီလီအတွက်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီများကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုနှင့်အတူ Society က "a" ကိုစရာ Sociedad က de Responsabilidad Limitada (SRL) "အဖြစ်လူသိများကြသည်။ နိုင်ငံခြားသားများတစ် SRL အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများအဘို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခု "အမည်မသိ Society က" စသော "Sociedad Anónima" (SA) ဟုခေါ်သည့်ပုံမှန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ပုံမှန်ကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့လုပ် SA အများအပြားရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူပိုကြီးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအဘို့ဖြစ်၏နှင့်ဖွဲ့စည်းရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းစာရင်းကိုင်စံချိန်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စာရင်းစစ်အကောင့် FILE လိုအပ်သည်။
တတိယ option ကိုအဘယ်သူမျှမကအခြားရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီချင်သူကိုဝါးလုပ်ငန်းရှင်များအဘို့စုံလင်သည်။ 2007 ခုနှစ်တွင်ချီလီတစ်ဦးတည်းရှယ်ယာရှင်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ခွင့်ပြုတဲ့ဥပဒပြဋ္ဌာန်းတဲ့ "SpA" အဖြစ်လူသိများမျက်မှောက်ရေးရာကော်ပိုရေးရှင်း (Sociedad por Acciones) ကိုခေါ်။ , ပြည်သူ့အကျင့်ကိုပုဂ္ဂလိကစာရွက်စာတမ်းဖြစ်လာ မှလွဲ. အောက်တွင်ဖော်ပြတဲ့ SRL တက် setting များအတွက်လုပျထုံးလုပျနညျးအများအားဖြင့်တစ်ဦး SpA ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ချီလီတောင်အမေရိက၌ရှည်လျားသောကျဉ်းမြောင်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည် "ချီလီသမ္မတနိုင်ငံ" သို့မဟုတ်စပိန်အတွက် "Repúblicaက de ချီလီ" ဟုခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအင်ဒီးတောင်တန်းသည်၎င်း၏အရှေ့နယ်စပ်နှင့်အနောက်မျက်နှာပေါ်တွင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတည်ရှိသည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်ဘိုလီးဗီးယား, အာဂျင်တီးနားအားဖြင့်အရှေ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်, တောင်ဘက် Drake Passage တည်ရှိသည်နေစဉ်ပီရူးမြောက်ဘက်နယ်စပ်။
စပိန်နှစ်လယ်ပိုင်း 16th ရာစုအတွင်းချီလီကိုလိုနီ။ ချီလီ 1818 အတွက်စပိန်ထံမှလွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုရွေးချယ်တင်မြှောက်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တစ်ဦးနှစ်ဦးအိမ်သူအိမ်သားအမျိုးသားကွန်ဂရက်နဲ့ "ပေါင်းတစ်စည်းတည်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအခြေခံဥပဒေသမ္မတနိုင်ငံ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
ယနေ့ချီလီတောင်အမေရိကသားအပေါင်းတို့အတွက်အတည်ငြိမ်ဆုံးအစိုးရများနှင့်သာယာဝပြောတဲ့စီးပွားရေးကိုတဦးရှိပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့နှငျ့ပတျသကျသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယှဉ်ပြိုင်, လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေး, လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ, စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်, ငြိမ်သက်ခြင်း၏ပြည်နယ်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, Globalization, နှင့်ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနိမ့်ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံး။ ချီလီကုလသမဂ္ဂတည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SRL) အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကချီလီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SRL) အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမျိုးအစားကမ်းလှမ်း:
•နိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်အားလုံးရှယ်ယာ: အယ်လ်တစ် SRL အတွက်ရှယ်ယာနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
•လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရား: မိမိတို့၏ရှယ်ယာမြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကိုအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှယ်ယာရှင်များမှာ '' liabilities ။
•နှစ်ဦးရှယ်ယာရှင်များမှာ: အဆိုပါနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခု SRL ဖွဲ့စည်းရန်နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များဖြစ်ပါတယ်။
•အဘယ်သူမျှမအစီရင်ခံ: SRL ရဲ့အစိုးရကနှင့်အတူစာရင်းစစ်အကောင့်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file ပါဘူး။
•အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: SRL ရဲ့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်တဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်နိမ့်ဆုံးရှိသည်။
ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SRL) အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်များကိုချီလီအတွက်အခြားမည်သည့်ဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကိုမှအတိအကျရောနှောသို့မဟုတ်လွန်းအလားတူဖြစ်ဘယ်တော့မှရမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်မပြုမီ, အဆိုပြုထားသောကုမ္ပဏီအမည်များရရှိမှုများအတွက်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုစစ်ဆေးမှုများကုမ္ပဏီများ Registry ကိုအတူဖျော်ဖြေနေသည်။
ဒါဟာပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုပယ်ချခဲ့ကြသည်ကိစ္စတွင်အထိသုံးအစားထိုးကုမ္ပဏီအမည်များကိုရှိသည်ဖို့အကြံပြုသည်။ "ဘဏ်", "အုပ်စု" သို့မဟုတ် "အာမခံ": ငြင်းပယ်ခံရများအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှိပြီးသားမှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီအမည်ကိုလွန်းအလားတူဖြစ်ခြင်း, သို့မဟုတ်ပါကပြည်နယ်စပွန်ဆာဆိုလို, ဒါမှမဟုတ်တူသောအထူးလိုင်စင်လိုအပ်စကားလုံးများကိုအသုံးပြုသည်ပါဝင်သည်။
အဆိုပါစပိန်အတိုကောက် "SRL" ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်ကိုအဆုံးတွင်ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါအဆင့်တွေကိုတစ်ဦး SRL ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက်မပြည့်စုံရလိမ့်မည်:
•ဖွဲ့စည်းရေးကုမ္ပဏီကလျှောက်ထားသူကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်များအတွက်အင်္ဂလိပ်စာနှင့်စပိန်အတွက်ရှေ့နေချုပ်တစ်ဦးကို Power စီမံထားသည်။
•ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများသည့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမှတ်ပုံတင်မည် (Conservador က de Comercio) နဲ့တင်သွင်းနေကြသည်။
•ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတရားဝင်ပြန်တမ်း (Diario Oficial) တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။
•အဆိုပါချီလီ IRS ကို (အခွန်အေဂျင်စီ) တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အခွန်အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ပေးပါသည်။
•လျှောက်လွှာ၏ခွင့်ပြုချက်အခါကုမ္ပဏီကကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry မှာမှတ်ပုံတင်နှင့်မှတ်ပုံတင်တဲ့လက်မှတ်ကိုအီးမေးလ်ကစေလွှတ်သည်။
အဘယ်အရာကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Entity မ
အဆိုပါကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေး entity အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုမ:
•အ SRL များအတွက်အများပိုင်ကငျြ့နှင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ (စာချွန်လွှာ) ပြင်ဆင်ကြရသည်။
•ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ကောက်နုတ်ချက်အတူပြည်သူ့အကျင့်အတွက် notarized နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်
တရားဝင်ပြန်တမ်းနှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုအတူ။
•နိုင်ငံခြားသားရှယ်ယာရှင်များအဘို့အသတ်မှတ်ခြင်းနံပါတ် (မြိုင်) ရရှိသွား။
•ကုမ္ပဏီသက်သေခံနံပါတ် (မြိုင်) ရရှိသွား။
တစ်ဦး SRL ဖွဲ့စည်းရန်နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်အဘို့အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်မည်သည့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံသားများရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကအစတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်သည်။
ရှယ်ယာရှင်များအများဆုံးအရေအတွက်က 50 ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး SRL စီမံခန့်ခွဲရန်ဒါရိုက်တာ၏နံပါတ်နှင့် ပတ်သက်. မျှလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ နှစ်ဦး (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) ရှယ်ယာရှင်များကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူတို့ထဲကတဦးတည်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကဒါရိုက်တာတစ်ဦးဘုတ်အဖွဲ့ပါဝင်သောသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဒါရိုက်တာများရှိသည်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ သို့သော်ဒါရိုက်တာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုပင်နံပါတ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းပြုမိသောအရာတို့ကိုရရှိဘို့လက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထားတဲ့လည်စည်းမဲမှုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားရပါမည်။ အဆိုပါအေးဂျင့်ရဲ့ရုံးလိပ်စာတစ်ခု SRL များအတွက်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
SRL ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file ဒါမှမဟုတ်အစိုးရတွေနဲ့စာရင်းစစ်ဖျော်ဖြေဖို့မလိုအပ်ပါ။
2017 ခုနှစ်, Non-နေထိုင်သူနိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်များပါဝင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမြတ်အစွန်းများအတွက်ဝင်ငွေအခွန် 35% ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကနိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်များမှဖြန့်ဝေဘို့ 35% တစ်ခွဲဝေအခွန်ရှောင်အခွန်များကပြဌာန်းထားသည်။
အတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာနှင့်နေထိုင်သူရှယ်ယာရှင်များကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်းအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဖြန့်ဝေအပေါ်တစ်ဦး 25% ဝင်ငွေနှုန်းဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းကသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်တဲ့သူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်ကြဘူးအဖြစ်၎င်းတို့၏ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာတွင်ဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
မှတ်ပုံတင်နှင့်ချီလီအတွက် SRL ဖွဲ့စည်းရန်အစိုးရဆီကခွင့်ပြုချက်များအတွက်တစ်လအထိမျှော်လင့်ထား။
ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုနှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ, တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးမျှနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်မျှစာရင်းစစ်သို့မဟုတ်အကောင့် File: တစ်ဦးကချီလီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SRL) ဤအကြိုးကြေးဇူးမြားပါဝငျသညျ။